Ny Media No Hafatra: E-Diplomacy Ao Ejipta · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Mey 2015 3:46 GMT
Tao amin'ny bilaogy Future Challenges (Fanamby Hoavy) no nivoaa ny lahatsoratra voalohany
Ny 27 Janoary 2011, namoaka didy ny manampahefana tao Ejipta ny amin'ny hanapahana tanteraka ny fifandraisana dizitaly rehetra ho fanakendàna ny fitomboan'ny antso hanao hetsi-panoherana eny an'arabe mba hanjeràna ny filoha teo aloha Hosni Moubarak. Naharitra andro enina ilay fanapahana tanteraka ka nandritra izany dia nanjavona tanteraka tety anaty aterineto i Ejipta. Tsy mbola nisy toa io raha habe sy faharetana noresahana. Nandamoaka ihany ilay tetikady rehefa dinihana, nampiseho ny tsy nahavitàn'ny fitondrana nampitsahatra ilay hatezerana malaza.
Tsy hoe zavatra iray mitatao ara-politika fotsiny ny teknolojia dizitaly ho an'ireo manampahefana Ejiptiana, fa koa vahiny iray avy amin'ny tsy taka-maso ary angamba aza izay mampidi-doza mihitsy. Nampiasain'ireo tanora Arabo mba hampitàna ny feony ny haino aman-jery sosialy ary hanapariahana izany amin'ny fomba mahomby indrindra, diso nahomby loatra aza angamba ka nahatonga ny lohataona Arabo nomena anarana hoe revolisiona dizitaly. Ny marina tsy azo lavina dia namorona fifandanjan-kery iray vaovao ny media sosialy, teo amin'ny fitondrana sy ny vahoaka. Io no media vaovao, ny fisiany fotsiny dia efa namorona tsindrin'entam-pahefana ho an'ny fitndrana. Ary nanomboka teo, ny fisiany dia niantraika tamin'ny fomba fanjifan'ireo Ejiptiana ny vaovao. Toy ny mpifindra-monina dizitaly no fijery ny manampahefana, tsy mahazo aina mihitsy ao anatin'ireny faritany vaovao ireny izay sarotra kokoa ny hanaovana fanarahamaso sy sivana raha miohatra amin'ireo media tranainy.
Na teo aza ireo fiovam-pitondrana sy ny fiantraikany tamin'ny olana diplaomatika, mety tsy ho vitan'ny mpamaky iray tsy Arabo mihitsy ny hahafantatra izay zava-mitranga. Zara raha nampiasa ny fitaovana dizitaly ireo manampahefana tao Ejipta, ary tamin'ny fiteny Arabo fotsiny. Riaso ho ohatra ireo tranonkala manaraka ireto, ny pejy ofisialin'ny mpitondra tenin'ny Tafika Ejiptiana, ny fantsona ofisialy YouTube an'ny Ministeran'ny Raharaham-Bahiny, ny kaonty ofisialy Twitter an'ny filoha teo aloha Muhammad Morsi ary ny kaonty ofisialy Twitter an'ny filoha amperinasa Abdelfattah Al-Sissi, ireny olona manana ny toerany ireny no mitondra fanavaozam-baovao momba ny toe-draharaha ao Ejipta. Saingy fanavaozam-baovao voasoratra amin'ny fiteny Arabo, na dia fantatra aza fa tsy izao tontolo izao no mamaky io fiteny io.
Ireo vahoaka voakasiky ny ezaka e-diplaomasia tahaka izany dia efa nanam-pahafahana sahady namaky ireo media tranainy tamin'ny fiteny Arabo. Fa tavela tao anatin'ny haizina kosa ireo ambiny maneran-tany mpiteny Anglisy, na Frantsay, na Espaniola. Ilay media hany mampiasa teny Anglisy azo noraisina dia ny https://twitter.com/MfaEgypt. Nanomboka tamin'ny Janoary 2015 io ary manana mpampiasa latsaka kelin'ny 700.
Ankehitriny, ampitahao io amin'ireo “e-diplomasia” misy asa famoronana nataon'ny any amin'ny faritra, Israely ohatra, izay namokatra kaonty media sosialy lasibatra sy tetikady ho an'ireo faritra izay tsy ananan-dry zareo solotena diplaomatika amin'ny fomba ofisialy. Na ny ISIS aza dia nametraka tetikady dizitaly maty paika, tamin'ny fampiasàna fitaovana mampiasa fiteny maro toy ny haino aman-jery sosialy, ny gazety ety anaty aterineto, kamerà HD, famoahana sary malama tsara sy voadio ara-teknika. Araka ny anoratan'ireo manampahaizana, Gregory Payne, Efe Sevin sy Sara Bruya azy,
Kanefa vitan'ireo manampahefana Ejiptiana ny miatrika ny “fianakaviambe iraisampirenena” amin'ny fomba mazava sy matanina, tahàka izay naseho nandritra ny Fihaonambe Momba ny Fandrosoana Ara-toekarena tao Ejipa tamin'ny Martsa 2015. Nanana tranonkala tena niasa tsara mihitsy ry zareo, nahitàna hatramin'ny kaonty Twitter natao manokana ho amin'izany sy ny tenifototra (#EEDC2015) ary ny fantsona YouTube natao manokana ho an'ireo lahatsary avy aoamin'ilay fihaonambe.